“ပိရမစ်ကြီး ဘယ်လိုဆောက်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ပိရမစ်ကြီး ဘယ်လိုဆောက်´´
Posted by ခင်ခ on Jan 10, 2013 in Creative Writing, Politics, Issues | 26 comments
“ဖေကြီး ဒီပုံတွေထဲမှာ ဘာလို့ ပိရမစ်တွေက အောက်ခြေကကြီးပြီး အပေါ်ကျတော့ သေးသေးချွန်ချွန် ဖြစ်သွားတာလဲ´´
“ပိရမစ်တွေက အဲလိုပုံစံဘဲဆောက်ကြတာလေ၊ အောက်ခြေကကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ဆောက်ထားပြီး အပေါ်က သေးသွားတော့ အပေါ်က ၀ိတ်ကို အောက်က ထမ်းထားနိုင်ပြီး ကြာရှည်ခိုင်ခံတာပေါ့သားရယ်၊ အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ အောက်နဲ့အပေါ် တည့်တည့်ဆောက်ရင် ကြာလာတော့ ဘေးတွေကနေ ကွာကျတာတို့ အက်ကွဲလာတာတို့ ဖြစ်တတ်တာလေ´´
“ဟုတ်တယ်လေ ဖေကြီးပြောတာမယုံလို့လား၊ သားသိအောင်ပြောရရင် မင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီး သားရောက် ဖူးတာဘဲ စဉ်းစားပြီး မြင်ကြည့်လိုက်လေ´´
“အင်း ဟုတ်တယ် ဖေကြီးရ၊ အဲဒါကြောင့် ပိရမစ်တွေက အောက်ခြေကြီးပြီး အပေါ်သေးသွားတာကိုး၊ ဒါဆို ပိရမစ် တွေရဲ့ အောက်ခြေတွေက ခိုင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်´´
“မှန်တာပေါ့ ပိရမစ်တွေ စတင်တည်ဆောက်ထဲက အောက်ခြေကိုခိုင်အောင် အရင်ဆောက်ရတာပေါ့´´
“ဒါနဲ့ဖေကြီး တိုင်းပြည်တွေမှာ သမ္မတတွေက ဘာလို့ တစ်ယောက်ထဲရှိတာလဲ´´
“ခုနသားမေးတဲ့ ပိရမစ်လိုပေါ့ အပေါ်ဆုံးက သေးသွားသလိုဘဲ တိုင်းပြည်မှာ အုပ်ချုပ်တဲ့သူတို့ သမ္မတ တို့က တစ်ယောက်ထဲရှိတာပေါ့´´
“ ဖေကြီးက ပိရမစ်လိုပြောတော့ အဲဒါဆို တိုင်းပြည်ကြတော့ အောက်ခြေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဟင်´´
“တိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ခြေအလွှာက လက်လုပ်လက်စားတွေ အလုပ်သမား လယ်သမားနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူ တွေများတာပေါ့´´
“ဒါဆို သူတို့ကို အခြေခိုင်ဖို့ဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ ဖေကြီး´´
“ဆင်းရဲမှု့ ပပျောက်ရေးတွေ လူတိုင်းအလုပ်အကိုင်ရရေးတွေ လုပ်ပေးရမှာပေါ့´´
“ဒါဆို သားတို့ မြန်မာနိုင်ငံက အဲလို လုပ်နေတယ်မလား၊ ဟိုတလောက သတင်းတွေမှာ ဆင်းရဲမှု့ပပျောက် ရေးလုပ်နေတယ်ဆိုလား ကြားခဲ့ရတယ် ဖေကြီး´´
“အင်း ! ဖေကြီးတို့နိုင်ငံက ပိရမစ်ကို ပြောင်းပြန်ဆောက်နေတာလေ´´
“ဘယ်လိုဖေကြီးရဲ့ သား နားမလည်ဘူး´´
“အော် အပေါ်က အုပ်ချုပ်သူတွေမှာ ကော်မတီအဖွဲဖွဲ့တွေ ကများပြီး၊ အောက်ခြေမှာ လုပ်နိုင်တဲ့သူက မရှိလို့လေ´´
“အလ် ဖေကြီးကလည်း ပိရမစ်ကို ပြောင်းပြန်ဆိုတော့ လဲသွားမှာပေါ့´´
“ဟုတ်တယ်သားရဲ့ ဖေကြီးလည်း ဘယ်တော့များလဲမလဲ လဲမလဲနဲ့ စိုးရိမ်နေရတာပေါ့´´
“ဒါဆို သားတွေးကြည့်မိတယ် ပိရမစ်ကိုပြောင်းပြန်ကနေ လဲရင် အင်း ဘိုင်းကနဲ နေမှာဘဲပေါ့ ဖေကြီးရာ´´
“ဟုတ်ပ သားရေ ဘိုင်းသံကြားရင် ဂိုင်းပြီးသာမှတ် ငါ့သားရေ´´
“ဒါနဲ့ သူတို့က ပိရမစ်ကို ဘာလို့ပြောင်းပြန်ဆောက်ချင်ကြတာလဲ ဖေကြီး´´
“ငါ့သားကလည်း အပေါ်မှာနေချင်တဲ့သူ ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့သူက များလို့နေမှာပေါ့´´
“သြော် အဲလိုဆိုတော့ ပိုမကောင်းဘူးလား ဖေကြီးက ဦးဆောင်တဲ့သူများတော့လေ´´
“ငါ့သားရယ် တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက် တကယ်ဆိုလုပ်ရနိုင်တဲ့အလုပ်ကို လူတွေအများကြီး ကော်မတီအဖွဲ့တွေ၊ အကြံပေးအဖွဲ့တွေလျောက်ဖွဲ့ထားတော့ အဒီအဖွဲ့တွေ အသုံးစရိတ်ကတင် မနည်းဘူးလေ၊ ပြီးတော့ ဖွဲ့ထားတဲ့ကော်မတီတွေ အကြံပေးတွေကလည်း စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ကြမှဖြစ်မှာလေ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ လူများပြီးပွဲမစည်ရင် ဘာထူးမလဲလေ တကယ်စွမ်းဆောင်နိုင်သူကို ထိထိမိမိနေရာပေး ဆောင်ရွက် ခိုင်းဖို့ အဓိကလိုတာပါ ငါ့သားရာ´´
“ဟော သားကျောင်းကားတောင် အိမ်ရှေ့ရောက်ပြီ သွားတော့ သား´´
“သား သွားပြီဖေကြီးရေ တာ တာ့၊ ´´
ကျောင်းကားစီးဖို့ ကျောပိုးလွယ်အိတ်လေးလွယ်ကာ ထမင်းချိုင့်အိတ်လေးဆွဲပြီး လျောက်သွားတဲ့ သားရဲ့ကျော ပြင်ကိုလိုက်ငေးကြည့်နေရင်း ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးတတ် မေးတတ်တဲ့ သားပေဘဲလို့ စိတ်ထဲရေရွတ်နေမိရင်း အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ငါ့သားတွေအရွယ်ရောက် အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အချိန်နဲ့ဆို ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲလို့ တွေး လိုက်မိရင်း “ဟင်း……………………. ´´ သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်မှုတ်ထုတ်မိကာ ခုနဖတ်လက်စ သတင်း စာရဲ့ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူပပျောက်ရေး ကော်မတီဖွဲ့တဲ့အမိန့်ကို လက်စသတ်ဖတ်ပြီး အခြားသတင်းတွေဆက်လို့ ဖတ်ကာနေဖြစ်တော့တယ်ဗျာ။
ဆိုရှယ်ကလပ်စ် အကြောင်း ကလေးနားလည်အောင် ရှင်းပြ ရေးပြနိုင်တာကို
ဦးစွာမန့်တဲ့အပြင် လင့်ပါညွှန်ပေးတဲ့အတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ရေ။
ကိုခ စာ ဖတ်ပြီး သဘောကျနေရာကနေ ဂီဂီ ပိရမစ်ကိုသွားကြည့်လိုက်မိမှ ကိုယ်လည်း ဘယ်လူထဲပါနေပါလိမ့် စဉ်းစားရပြီ။
WE Eat For You ထဲမှာ များ ပါနေပြီလား။
မခိုင်ဇာရေ WE Eat For You ထဲမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ထက် မြင့်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က တစ်ရက်လုပ် တစ်ရက်စား တော့ဟုတ်ဘူး၊ တစ်လလုပ် တစ်ပတ်စား လေးတွေပါ။ လစာက တစ်ပတ်လောက် သုံးရင် ပြောင်ရောမို့လေ။
ဟယ်။ အဲဒီလို ဆိုလို တာ မဟုတ်ပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ဒုက္ခကို ဝင်ထမ်းဖို့ မစဉ်းစားမိပဲ အစားအသောက်လောက်ပဲ စဉ်းစားမိနေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆလို့ပါလေ။
မခိုင်ဇာ ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကလည်း ခင်လို့ နောက်ပြီးမန့်တာပါ။
ရေးပြသွားတာ ကောင်းလှသဗျာ ….
မြန်ပြည်ရဲ့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတဲ့ ပိရမစ်ကို
ပုံစံတကျ ပြန်တည့်နိုင်ဖို့ အတွက် တကယ် အလုပ်လုပ်တဲ့ လူတွေတော့ လိုတယ်ဗျ …
အရင်က (ခုလည်း ဒီလိုပဲလားတော့ မသိ) အစိုးရ ရုံးအလုပ်တွေမှာဆိုရင် …
ရုံး အလုပ်လုပ်ချိန်က နည်းနည်းးး
လေပန်း နေတာက ခပ်များများ ….
လေပန်း နေတဲ့အချိန် အလုပ် အပ်တဲ့လူ လာပြီဆို
မကြည်သလို မျက်နှာထားနဲ့ ဟောက်စားက လုပ်လိုက်ချင်သေးးး
မြန်မာပြည်က ပိရမစ်ကို ပြန်မတည့်ဘဲ ရှေးမူမပျက် လဲမှာစိုးတော့ အုပ်ချုပ်သူတွေက ဒေါက်ထောက်ထား ဖို့ဘဲ ကြိုးစားကြတယ်ဗျ၊ မိန်ခွန်းတွေမှာတာပြောင်းပေမယ် အောင်ခြေကတော့ အရင်လိုပါဘဲဗျာ ကိုအံစာတုံး ရေ။
စာဖတ်နေရင်းနဲ့ ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကိုလူအေး နဲ့ မောင်ပန်းမွှေး သားအဖ အမေး အဖြေ ကာတွန်းလေးကို သတိယမိတယ်..
အော်.. မြန်မာပြည်က ပိရမစ်ကို ပြောင်းပြန်ဆောက်တာနော်…
မမွန်ကစ်ရေ အဲဒီလို ကိုလူအေး နဲ့ မောင်ပန်းမွှေး အမေးအဖြေကို ကျွန်တော်တင်တဲ့ပိုစ့်တစ်ခုမှာ
အရီးခင်လတ်ကလည်း သတိရဘူးတယ်လို့တစ်ခါရေးဖူးတဲ့။ တကယ်လဲ ငယ်ရွယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ပေမယ့် ခုထိ ပြန်စဉ်းစားရင် မှတ်မိနေစဲဘဲဗျ။
ဒီနေ့သတင်းစာမှာတောင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး….. ဆိုတဲ့ ကော်မတီ။
အမျိုးသားစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု့ ………… ဆိုတဲ့ ကော်မတီ တွေ ထပ်ဖွဲ့တာ ဖတ်နေပါ၏။
ကလေးလေးက လေးခလို အဖေမျိုးရထားတာ သိပ်ကံကောင်းတာဘဲနော် စီကာပတ်ကုံးရှင်းပြထားတာ သဘောပေါက်လွယ်တယ် မိဗုံလည်းလေးခ ရှင်းပြလိုက်မှ နားလည်သွားတော့တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
မိဗုံရေ ဖေကြီး နဲ့ သား ပုံစံ တစ်ခါလည်း ခုလို ( မရောက်မချင်း သွားကြပါစို့။ ) ပိုစ့်အဖြစ်ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
အခုလည်း ဆင်းရဲမူ့ပပျောက်ရေးကို ဆေးမြီးတိုနဲ့ယာယီ ကုနေကြတယ်
လွယ်လွယ်ရ လွယ်လွယ်သုံး အကြွေးတွေတင်ပြီး ထပ်မွဲမှာ မြင်သေး၏။
ကိုပေါက် တစ်ခါကရေးခဲ့သလို လွှတ်ချဖို့ထက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသာပိုရအောင် ဟို ကော်မတီလည်းပါ ဒီအဖွဲမှာလည်းပါ ဟိုကော်မတီလည်းသူတို့ဘဲ ဒီကော်မတီလည်း ဒီလူတွေဘဲ နဲ့ လုပ်နေတာ။ အဲဒီလူတွေကဘဲ အရင်အစိုးရတုန်းက တိုင်းပြည်ခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတာဘဲလေ။
တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူရှိပါတယ် မသိသာလဲမဟုတ်ဘူး သိသိကြီးနဲ့ ညာဝါးနေကြတာပါ။
အရည်မထွက်တော့တဲ့ ကြံဖတ်ကို အရည်ဆက်ညစ်မှတော့ အလကား အားကုန်တာဘဲ ရှိတော့မပေါ့ဗျာ။
ပိရမစ် အကြောင်းရေးပြတာလေး နှိုင်းပြတာလေးကြိုက်သဗျို့…
ပိုစ့်ကို အစကဖတ်ပြီး အဆုံးလဲရောက်ရော ဖတ်ရှု့သူကို ခင်ခ က ကျေးဇူးတင်ပြီးသားပါ။
တစ်ခါတလေကျရင် ကျွန်တော်လည်း ဖတ်ပေမယ့် မမန့်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်ဗျာ အလုပ်ဆိုတာလည်း လုပ်နေရအုံးမယ့် သူတွေမလားဗျာ။
ကျွန်မတို့ဆီမှာ ဆင်းရဲမှုပပျောက်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်သေးတဲ့ကိစ္စပါ။
လက်တွေ့ကျတဲ့ဒေသကိုရောက်နေလို့လားတော့မသိဘူး။ကျွန်မတို့ဇာတိမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲဆင်းရဲတယ်ပြောပြော ငတ်လောက်အောင်တော့ မမွဲကြသေးဘူး။
ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ဒီလောက်အထိနက်တယ်ဆိုတာ သိခွင့်ရတယ်။
အပြန်အလှန် စကားပြောဟန်လေးနဲ့ ..
လေးလေးခ ဇာတ်လမ်းလေးတွေက ဖတ်ရတာ ချောမွေ့ နေပြီး..
ဖတ်အပြီးမှာ.. ရသ မြောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် ။
တိုတို ကျစ်ကျစ် နဲ့ထိထိမိမိ…ရေးတတ်တာလေးလည်း.
ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့်အိပ်ထဲ ဖိတ် ဆိုတာ နဲ့ ကြည့်လုပ် လိုက်ကွာ ဆိုတာ .. အဲဒါ .. အဲ့ဒါ ……..
ဂျာနယ် တစ်ခုမှာ Hot News မှာလား ပဲ . လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နဲ့ မြို့မိမြို့ဖ တွေက .. ပြည်သူ့အသံ နားထောင်ပွဲဆိုလား လုပ်တာကို ဖိတ်ထားပေမယ့် .. မလာလို့ ဆိုလား ပဲ .. အဲ့လို အဲ့လို
ဒီပို့ စ်မှာ သားအဖနှစ်ယောက်စကားပြောပုံနဲ့ရေးပြထားတာလေးကို ကြိုက်တယ်ဗျာ
ပိရမစ်ကြီးပြောင်းပြန်ဆောက်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတော့မတွေးမိဘူးပေမဲ့
ဖွဲ့စည်းပုံက လေထီးပုံလို့တော့ခဏခဏ နောက်ပြောင်ပြောဖူးပါရဲ့…
အောက်ခြေလူတစ်ယောက်အတွက် ဆိုင်းထား သိုင်းထားရတဲ့လေထီးကြိုးတွေ နဲ့ အပေါ်ကဖြန့်မိုးထားတဲ့လေထီးရွက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ ….
ပိရမစ်ကိုဇောက်ထိုးဆောက်တော့ကျွံဝင်သွားရော အပေါ်မှာ မျက်နှာပြင်ပြားပြားကြီးပဲကျန်ခဲ့မှာ အဲဒါပြီးတော့မှာ အပေါ်ကနေဆက်ပြီးတည့်တည့်ပြန်ဆောက်မှာ ပိရမစ်ကိုဗျာ အပေါ်ကောအောက်ကော ကြိုက်တဲ့နေရာ သွားနိုင်အောင် ဆောက်နေတာထင်တယ် ။
နန်းတော်ရာသူ ပြောသလိုဘဲ ဆင်းရဲမှု့ပပျောက်ရေးက ထိထိမိမိ မလုပ်နိုင်သေးသလို plan အားဖြင့်လည်း သေချာကျနဆွဲပြီးလုပ်နေတာမျိုး မတွေ့ရသေးတော့ ရင်လေးစရာဘဲဗျာ။
ဖတ်ပြီးအားပေးသွားတဲ့ ကိုအလင်းဆက် Mလုလင် ကိုပေ ကိုကြည်ဆောင် နဲ့ ကိုကြောင်ကြီးတို့ ကျေးဇူးဗျာ။
ကိုသုဝေရေ ပိရမစ်ကြီး ကျွံဝင်ခြင်းနှင့်အတူ အခြေခံ လူတန်းစားအလွှာက အလုပ်သမား၊ လယ်သမားနဲ့ ပြည်သူတွေလည်း တစ်ပါးထဲမြေကြီးထဲရောက်သွားမှဖြင့်ဆိုပြီး တွေးနေမိတယ်ခင်ဗျ။
ဘေးက ဒေါက်တိုင်တွေ ထောက်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ